Dare reHigh Court Rinobvuma Chikumbiro chevana vaMushakabvu Mugabe Chekuti Vapikise Kufukunyurwa kweMutumbi Wavo
Mutumbi waVaRobert Mugabe kwaZvimba.
Dare repamusoro reHigh Court nemusi weChina rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu VaRobert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa vavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre.
Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro, vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell naJustice Amy Tsanga vakawirirana kuti vana vaVaMugabe vanoti Bona Mutsahuni Mugabe, Tinotenda Robert Mugabe Jnr. naBellarmine Chatunga vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo waMambo Zvimba wekuti mutumbi wababa vavo ufukunyurwe kwavakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre kuHarare.
Vana vaVaMugabe vainge vapikisa mutongo waMambo Zvimba kudare ramejasitiriti muChinhoyi asi mutongi Amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanise kupikisa mutongo waMambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare raMambo asi Amai vavo Grace Mugabe.
Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara.
Rimwe remagweta evana vaVaMugabe, VaFungai Chimwamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo waMambo.
VaChimwamurombe vati vave kutonyorera Mejasitiri Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi.
Mutauriri wemhuri yekwaMugabe ari muzukuru waVaMugabe, VaLeo Mugabe, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvemutongo uyu.
Studio 7 yakundikana kubata Mambo Zvimba kuti tinzwewo divi ravo pamutongo uyu sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi.
Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwaVaMugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nhasi.
Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare.